Oziọma taa 20 Septemba 2020 na okwu Pope Francis | Blọọgụ nke ekpere
Oto n̄wed Isaiah prọfet
Chọọ Jehova mgbe achọtara ya, kpọkuo Ya mgbe Ọ nọ nso.
Ka onye ajọ omume hapụ ụzọ ya, meekwa ka onye ajọ omume hapụ echiche ya. +
laghachikwuru Onye-nwe-ayi nke g willnwe obi-ebere n'aru Ya, laghachikuru kwa Chineke-ayi, Onye niveswepu amara.
N'ihi na echiche m abụghị nke unu,
ụzọ gị abụghị ụzọ m. Ibu nke Onye-nwe-ayi.
Ego ole elu igwe kwụgidere n'elu ụwa,
Uzọm nile echi uzọ-Gi nile,
echiche m karịrị echiche gị.
Site na akwụkwọ ozi nke Pọl Pọl degaara ndị Filipaị
Mụnna m, a ga-enye Kraịst otuto n’arụ m, ma m ga-adị ndụ ma m ga-anwụ.
Maka m, n'eziokwu, ịdị ndụ bụ Kraist ma ịnwụ bụ uru.
Mana ọ bụrụ na ibi n’ime ahụ pụtara ịrụpụta mkpụrụ, amaghị m ihe m ga-ahọrọ. N’ezie, ejidere m n’etiti ihe abụọ a: Achọrọ m ịhapụ ndụ a ka mụ na Kraịst biri, nke ga-aka mma; ma ọ diri unu nkpà ka ọ di m’nọ n’anu-aru.
Ya mere, na-akpa àgwà n’ụzọ kwesịrị ozioma nke Kraịst.
N'oge ahụ, Jizọs tụrụ ndị na-eso ụzọ ya ilu a:
Ala-eze elu-igwe yiri nwoke nke-nwe ala, nke putara n'isi-ututu igota ndi-orù nke ubi-vine ya. Enye ama enyịme ye mmọ denarius kiet ke usen onyụn̄ ọdọn̄ mmọ ẹka in̄wan̄ vine esie. Mgbe ọ pụrụ n’ihe dị ka n’elekere itoolu nke ụtụtụ, ọ hụrụ ndị ọzọ ka ha guzo n’ámá, na-enweghị ọrụ, ọ sịrị ha: “Unu onwe unu, gaanụ n’ubi vaịn m; ihe ziri ezi ka m ga-enye gị ”. Ha we ga.
Ọ pụrụ ọzọ n'ihe dị ka n'ehihie na n'ihe dị ka atọ, mee otu ihe ahụ.
Mgbe ọ pụrụ ọzọ n'ihe dị ka mmadụ ise, ọ hụrụ ndị ọzọ ka ha guzo ebe ahụ wee sị ha: "Gịnị mere unu ji guzoro ebe a ụbọchị dum na-eme ihe ọ bụla?" Ha zara ya, sị: "N'ihi na ọ dịghị onye jidere anyị n'ehihie." O we si ha, Unu onwe-unu ba kwa n'ubi-vine.
Mgbe o ruru uhuruchi, onye nwe ubi vaịn ahụ gwara onye ọrụ ubi ya: "Kpọọ ndị ọrụ ahụ ma nye ha ụgwọ ọrụ ha, bido na ndị ikpeazụ ruo na ndị mbụ".
N’elekere ise nke ehihie, onye ọ bụla natara otu mkpụrụ ego dinarịọs. Mgbe nke mbụ bịara, ha chere na ha ga-anata karịa. Ha natakwara otu mkpụrụ ego dinarịọs n'otu n'otu. Otú ọ dị, mgbe ha wepụrụ ya, ha tamuru ntamu megide nna ha ukwu na-asị: "Ndị nke ikpeazụ rụrụ ọrụ naanị otu awa ma were ha dị ka anyị, ndị buuru ibu arọ nke ụbọchị na okpomoku." Ma nna ukwu ahụ, na-aza otu n'ime ha, kwuru : “Nwoke m, emejọghị m gị. Did kweghị m n’ọnụ nke otu mkpụrụ ego dinarịọs? Were nke gị laa. Mana achọrọ m inye ya otu ihe ị na - eme: enweghị m ike iji ihe m mee ihe m chọrọ? Ma ọ bụ ị na-enwe anyaụfụ n'ihi na m dị mma? ".
N'ihi ya, ndị ikpeazụ ga-abụ ndị mbụ na ndị mbụ, ndị ikpeazụ ».
"Ikpe na-ezighi ezi" nke onye isi ahụ na-akpasu iwe, na-ege ntị na ilu ahụ, na-awụlikwa elu n'ọkwa, n'ihi na Jizọs achọghị ikwu banyere nsogbu ọrụ ma ọ bụ naanị ụgwọ ọrụ, kama banyere Alaeze Chineke! Ozi a bụ nke a: na alaeze Chineke enweghị ndị na-enweghị ọrụ, a na-akpọ onye ọ bụla ka ọ rụọ ọrụ ha; na maka ihe niile n’ikpeazụ a ga-enweta ụgwọ ọrụ na-abịa site na ikpe ziri ezi nke Chineke - ọ bụghị mmadụ, luckily maka anyị! -, ya bu, nzoputa nke Jisos Kraist nwetara nye anyi site n’onwu ya na nbilite n’onwu ya. Nzoputa nke ekwesighi, ma nye ya - nzoputa bu n'efu. Ọ na-eme ebere, ọ na-agbaghara ọtụtụ ebe. (Angelus, Septemba 24, 2017
← Na post gara aga Gara aga post:Saints Andrew Kim Taegon, Paul Chong Hasang na ndị enyi dị nsọ nke ụbọchị maka Septemba 20
Ọzọ Post → Post ozo:Ọbara nke San Gennaro na-a liụ mmanya na Naples